त्रास जित्ने अस्त्र
ब्लग त्रास जित्ने अस्त्र
बाह्रखरी - गोविन्द अधिकारी शुक्रबार, चैत १४, २०७६
‘‘म अलिअलि सम्झन्छु । रम्घाली बूढाले काखमा लिएर डिठ्ठाको चौतारामा लगेपछि मेरो नारीमा खोपाएको । वैद्यको अनुहारअरू सम्झना छैन तर एउटा आँखामा फुलो परेको थियो । पछि सुनेको हो भाँगेबाट आउने बाटामा लिहुतको पाखामा भाँजा हालेका थिए रे !’’
मैले ८७ वर्षका मेरा बालाई सोधेको थिएँ – ‘‘अहिलेको जस्तो महामारी र बन्दाबन्दीको कुनै सम्झना छ ?’’
त्यही प्रश्नको उत्तरमा उहाँले भन्नुभएको हो ।
‘‘हामी सबैलाई घरभित्रै राखेजस्तो लाग्छ । त्यो महामारीमा मेरै दाजु र दिदीहरू तीन जना मरे । गाउँमा अरू कति मरे मैले थाहा पाइन । पछि पनि त्यसबारेमा कुरा भएको सम्झना छैन ।’’
अहिले उन्मूलन भएको भनिएको बिफरको महामारी थियो त्यो । महामारी देखिनेबित्तिकै गाउँहरूलाई एक्ल्याउने चलन थियो । त्यसरी एक्ल्याइएको मैले पनि थाहा पाएको थिएँ । भाँगे गाउँमा हैजा आयो भनेर सिउदी खोलामा भाँजा हालिएको थियो । आँबुमा कटुवाल लगाएर भाँजा हाल्न जान ऊर्दी गरिएको थियो । यो यस्तै विसं २०२१ – २२ सालतिर हुनुपर्छ । याञ्चोकका मेजर नरबहादुर थापा पेन्सनमा आइसकेका थिए । उनी औषधि पनि गर्थे । उनले विपत्तिमा परेकाहरूलाई यसरी एक्ल्याउनु पाप हो भन्दै भाँजा फालेर भाँगे गई औषधि दिएपछि हैजा मत्थर भएको थियो ।
जेहोस्, आफू जोगिन बन्दाबन्दी गर्ने चलन पुरानै हो । तर, यसरी दुनियाँभर एकैपटक बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था भने यही पहिलो होला । संसारमा आउनजान सजिलो भयो । यसैले अहिले दुनियाँको एउटा कुनामा देखिएको रोग अर्को छेउमा पनि सजिलै पुग्छ । मानिसलाई प्रकृतिले हिमाल, नदी, समुद्र, मरुभूमि अनेकौं अवरोध खडा गरेर अलग्ग्याएको थियो । मान्छेले सबै बाधा पन्छायो । प्रकृतिले अहिले त्यसैको सजाय दिएको पो हो कि? कि मानिसको संयम, धैर्य र मानवीयताको परीक्षा लिएको होला ?
संसारमा सबैतिर कोलाहल छ । दुनियाँलाई त्रासको तुवाँलोले ढाकेको छ । सञ्चारको सुविधाले कहाँ के भएको छ सजिलै थाहा पाइन्छ । यसले त्रास पनि बढाएको छ । निराश पनि बनाएको छ र आशा पनि जगाएको छ । आफूलाई विशिष्ठ ठान्ने मानिसहरू कति मामुली रहेछन् ? जाबो कीटाणुका डरले आफन्तहरूबाट समेत टाढिएर एक्लै बस्ने ? मनमा अहिले खेल्ने कुरा यिनै हुन् ।
पृथ्वी राजमार्ग आँगनमै पर्छ । सडकमा आवागमन दिनहुँ कम हुँदै गए पनि पूरै रोकिएको छैन । विशेषगरेर मोटरसाइकलमा हिँड्नेहरू रोकिएका खासै छैनन् । युवा छन् लाग्दो हो हामीलाई कोरोनाले छुँदैन । तर, यो त मायावी दैत्यजस्तो रहेछ । आक्रमण गर्न नसक्ने शरीरमा पनि प्रवेश गरेर अर्को कसैलाई मार्न सक्ने । धेरै पुराणहरूको सुरुमा भनिने राजा परीक्षितको मृत्युको कथाजस्तो । ऋषिको श्रापपछि राजा परीक्षित सर्पबाट जोगिन पूरा बन्दोबस्त मिलाएर यज्ञमा बस्छन् तर पूजाका लागि लगिएको फूलमा सानो कीराको भेषमा तक्षक नाग राजालाई डस्न पुग्छ र राजाको मृत्यु हुन्छ । यस्तै युवायुवती त जोगिएलान् तर उनीहरू हुँदै घरमा प्रवेश गरेको कोरोनाभाइरसले घरमा बूढापाकालाई आक्रान्त बनाउन सक्छ । त्यतिबेला कुनै मन्त्रीले भनेजस्तै हाम्रो रोग प्रतिरोधक क्षमताले जोगाइदिए त हुन्थ्यो । जोगाएन भने !
हाम्रो पाँच परिवारका बीचबाट अर्को सडक छ भित्र गाउँतिर जाने । यसैले पनि मानिसहरूको आवतजावत बढी नै हुन्छ । बा सडकपारिको घरमा कान्छो भाइसँग बस्नुहुन्छ । यसैले कुराकानी गर्न सजिलो पनि छैन । बालाई जोगाउनका लागि म पनि नजिक गएको छैन । अरूलाई पनि नजिक नजान भन्ने गरेको छु । तर, अत्यास त बालाई पनि लाग्दो हो । मजस्तो एक्लै बस्न मन गर्नेलाई त लाग्छ । अनि, सडकको वारि र पारिबाट हामी कुरा गर्छौँ । बाले बिर्सनु भएका कुरा मैले सुनेको, सम्झेको सम्झाउँछु । यसरी बन्दाबन्दी भन्दाभन्दै बा, भाइबुहारीहरू, भतिजाहरू भतिजीहरू, तिनका छोराहरूसँग जम्काभेट भइहाल्छ । सायद, यो एकान्तवास हाम्रो संस्कारमा मिल्दैन । हाम्रो समाजको एकाइ त व्यक्ति नभएर परिवार पो रहेछ । कोरोनाले सिकाएको यो पाठ राज्यको नीति निर्माणका बेला सम्झनुपर्ने पो देखियो ।
पढिरहेको छु, अबको संसार कोरोनाभन्दा पहिलेको जस्तो हुनेछैन । संसारको नेतृत्व कोरोनाका कारण अमेरिकाको हातबाट फुत्केर चीनको साथमा पुग्छ रे ! लोकतन्त्रमाथि एकपटक यही कोरोनाको संक्रमणलाई नै निहुँ बनाएर आक्रमण हुने खतरा पनि छ । तर, एउटा संयोग – लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि अधिनायकवादी मानसिकता भएका वा अधिनायकवादमा विश्वास गर्ने नेतृत्व भएको पार्टीका सरकार भएका देशमा नै कोरोनाको कहर बढी भएको रहेछ । अमेरिका, बेलायत, स्पेन, इटाली सबै लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका तर अधिनायकवादी प्रवृत्तिका नेताहरूले शासन गरेका छन् । अर्कातिर, अपेक्षाकृत उदार लोकतान्त्रिक नेतृत्व भएको जर्मनी र फ्रान्समा भने कोरोनाको कहर अलि कम रहेछ । यसैले कोरोनाको कहरलाई निहुँ बनाएर हुने प्रहारको मार खप्न लोकतान्त्रिक पद्धति सक्षम हुने पनि विश्वास गर्न सकिन्छ ।
यतिबेला हामी नगर हुनै लागेको गाउँमा छु । छोराछोरी नातिनातिनीहरू सँगै नभए पनि एक्लै छैनौ । धेरै छुतछात नगरी बस्न सक्छौँ । नियाश्रो लागे वल्लोपल्लो घर पनि जानसक्छौँ । चिन्ता त मलाई छिमेकी पनि नचिन्ने गरेर बसेको बाक्लो बस्तीमा बस्नेहरूको लागेको छ । अनि डाँडामा वा फाँटको बीचको एक्लो घरमा बस्नेहरूको लागेको छ । जनसंख्याको सही सूचना हामीसँग छैन । त्यस्तामा रहेकाहरूमा पनि गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएकाहरू, बूढापाकालगायतका अशक्तहरूको अवस्था यति नै बेला बिग्रला कि भन्ने डर लागेको छ । स्थानीय सरकारहरूले त्यस्तो जनसंख्याको नक्सांकन गराएको भए त हुन्थ्यो । तर, धेरैले गराएका छैनन् । राज्यले कसरी यस्ता नागरिकलाई बेवारिस नछाड्ने हो ? कतै योजना बनेको होला ? नेपाल रेडक्रसजस्ता सामाजिक संस्थाहरूको पनि दायित्व हो ।
महाभारत युद्धको एउटा प्रसंगबाट यो गन्थन टुंग्याऊँ – द्रोणाचार्यको हत्यापछि जस्तोलाग्छ अश्वत्थामाले अर्जुनमाथि नारायणास्त्र प्रहार गरे । कृष्णले अर्जुनलाई रथबाट ओरालेर सबैलाई नारायणास्त्र समक्ष आत्मसमर्पण गर्न भने । भीमले अटेर गर्दा आफैँले उनलाई रथबाट ओराले । नारायणास्त्र साम्य भयो ।
कोरोनासँग डराएर हामी सकेसम्म अरूको सम्पर्कमा नगई घरभित्रै बस्यौँ भने यसका कीटाणुहरू १४ दिन अर्थात् एक पक्षमा मर्ने रहेछन् । यसैले यसलाई अटेर गर्नुभन्दा सायद यसको बाटामा नपर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । कोरोना आँबैले भनेको पिचास हो सायद कुबेलामा कतै निस्कँदा समात्ने ।
चिकित्साकर्मीलाई डराउन र भोकाहरू सडकमा आउन परेन भने कोरोनालाई हामी जित्न सक्छौँ होला । सरकारहरू यति धेरै छन् । के यति गर्न सकोइनन् र ?
शुक्रबार, चैत १४, २०७६ मा प्रकाशित